Ukuphupha ngejeli Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ngokubanzi, igama elithi "jelly" lisetyenziselwa ukuchaza ukutya okunokufana okufana nejeli. Rhoqo, i-gelatin iyaqondwa ukuba ithetha ukuba incindi yeziqhamo ebiliswe ngeswekile ethe yatyeba kakhulu. Amaxesha amaninzi oku kuyatyiwa njengokusasazeka.
Nangona kunjalo, ijeli akufuneki ibe mnandi. Ukwahluka okunencasa, inyama yejeli yenziwa ngomhluzi wenyama, owaziwa kamva ngegama elithi "aspic." Inyama sisitya esibandayo apho inyama okanye intlanzi ijeliwe kunye nemifuno.
Ke ngoko, ekutolikweni okwandisiweyo kwamaphupha, izithako ekuphekwe ngazo ijeli ephupheni kufuneka nazo ziqwalaselwe okanye uhlobo lwejeli kufuneka lusetyenziswe. Ngaba yayiluhlaza okwesibhakabhaka, amaqunube amnyama, okanye gooseberries? Okanye wenze iiblueberries okanye iquince ngelixa ulele? Enye into enetyiwa inokucingelwa.
1 Uphawu lwephupha «ijeli» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ijeli» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ijeli» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ijeli» - ukutolikwa ngokubanzi
Isimboli yephupha "ijeli" inokusetyenziswa kutoliko lweli phupha njengophawu lwesenzo okanye umlinganiso. ukuthintela Makuqwalaselwe. Umphuphi uzilungiselela ngaphakathi ngamaxesha anzima, okanye kufuneka enze njalo kwaye ahlule amandla akhe ngokuchanekileyo. Kuba kungoko kuphela apho uya kusinda kula maxesha aneengxaki ngaphandle kokukhathazeka.
Ukupheka i-jelly ephupheni kunokubonisa intlanganiso evuyayo kunye nabahlobo. Ukuba ubona ijeli kunye noshukela kule meko yamaphupha, oku kuyaqondwa njengophawu lwecala elimnandi lobomi. Ukuba umntu ugcwalisa i-jam ebilisiweyo kwiglasi ephupheni, umntu ophuphayo kufuneka azi ngeziganeko ezonwabileyo nezimnandi zexesha elidlulileyo.
Kwakhona, kufanele kuqatshelwe kulo mfanekiso wephupha ukuba yeyiphi ijeli ephekwe kuyo. Ijeli yeziqhamo ephupheni zihlala zibonisa impumelelo kwaye ngaphezulu kwako konke Yonwabela ubomi. Ijeli yeziqhamo ebomvu njengophawu lwephupha ingathanda ukutsala umdla kwizitha ezisingqongileyo, ngelixa iziqhamo zomgubo ezenziwe ngeziqhamo ezimnyama zinokubangela uxinzelelo kunye nentlungu.
Nabani na otya i-jelly emuncu ephupheni lakhe kufuneka azilungiselele ukuphazamiseka nokulwa ngaphakathi el mundo yomlindo. Ngokutsho kohlalutyo ngokubanzi lwamaphupha, ukungcamla kakuhle kwejamu njengephupha kuzisa uhambo kunye nokungalindelekanga. Suerte ngokufanayo.
Uphawu lwephupha «ijeli» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba leengqondo lokuchazwa kwephupha, ijeli jerry ikakhulu ifanekisela ngamaphupha. iimfuno zesondo. Umphuphi kufuneka ayazi le nto kwihlabathi lokuvuka. Nangona kunjalo, awufanele ungxame ngoku. Ukuba upheka ubunzima obufana nejeli embizeni ngelixa uleleyo, ufumana uphawu lweempawu ezithile ongathanda ukuzidibanisa ngokwahlukileyo kubomi bakho.
Ukuba umntu olalayo wenza i-aspic yenyama okanye intlanzi ebuthongweni bakhe, intando yakhe iminqweno yesini tyhala ungene ezingqondweni zakho. Ukuphupha kufuneka kujongane noku ngokusondeleyo kwaye ungazikhathaleli. Ukuveliswa kwesihlunu ephupheni ukusuka kwiminqathe okanye eminye imifuno kunokuqondwa njengokubhekisa kwezesondo kuloo mntu kuthethwa ngaye.
Ngokwenkcazo yengqondo yamaphupha, ijeli eswiti njengophawu lokuphupha kukubonakalisa inkanuko. Uyolo. Umphuphi angathanda ukonwabela oku ebomini bokuvuka. Indawo e-erotic nayo iyaqwalaselwa, kodwa hayi kuphela.
Uphawu lwephupha «ijeli» - ukutolika kokomoya
Uhlalutyo olugqithisileyo lwephupha lubona kwisimboli "jelly" ukulangazelela komphuphi ithemba nethemba kwizinto zokomoya.
Iphupha lakho kufuneka likwazise ukuba ungowakho amandla okomoya kuya kufuneka wonge ixesha apho ulifuna ngokungxamisekileyo.